ओलीले प्रचण्डलाई भने -मैले केही पनि छा ड्दिन, तपाईँहरु अगाडि ब ढ्नुस्। – Nepal Online Khabar
ओलीले प्रचण्डलाई भने -मैले केही पनि छा ड्दिन, तपाईँहरु अगाडि ब ढ्नुस्।
काठमाडौं – नेपाल क,म्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’बीच बुधबार झण्डै तीनघन्टा भेटवार्ता भएको छ । ए,जेण्डागत छलफलमा तीन घन्टासम्म वार्ता भए पनि नि,कास भने नि,स्किएन । भोलि फेरि भे,टवार्ता गर्नेगरी दुवै अध्यक्षले आजको छलफल सके । भेटवार्ताको समयमा नेकपा महासचिव विष्णु पौडेल र स्थायी कमिटी सदस्य जनार्दन शर्मा पनि केही समयसम्म स,हभागी थिए ।
झण्डै तीनघन्टासम्म भएको छलफलमा वि,गतको स,हमति का,र्यान्वयन, स्थायी कमिटी बै,ठकमा उठेको दुवै पदको रा,जीनामा, नयाँ स,हमतिलगायतका विषयमा छलफल भएको स्रोतले जनाएको छ । एक स,चिवालय सदस्यका अनुसार आजको छलफलमा प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीमात्रै वा अध्यक्षमात्रै बन्नका लागि ओलीलाई आ,ग्रह गरेका थिए । प्रचण्डले भने, पार्टी एकताको भावना, सबै पक्षको अ,सन्तुष्टिको सम्बोधनका लागि पनि अब तपाईँले कुनै एक प,दमात्र लिनुस् ।
पार्टी अध्यक्ष वा प्रधानमन्त्रीमध्ये एकमा स,म्झौता गरौँ । आम कार्यकर्ताको पनि चाहना पार्टी एकताव,द्ध हुनुपर्छ भन्नेमै छ । त्यसैले तपाईँले पनि ल,चकता अ,प्नाउनुस् । प्रचण्डको आ,ग्रहलाई ओलीले अ,स्वीकार गरे । उनले भने, अहिले मैले अध्यक्ष वा प्रधानमन्त्रीमध्ये कुनै पनि पद छा,ड्दिन । तपाईँहरु अगाडि बढ्नुस् । म पनि ब,ढौँला । पार्टी अध्यक्ष हुने भए छिटो महाधिवेशन गरौँ । होइन भने तपाईँहरुले के गर्ने गर्नुस् । मैले के गर्ने गर्छु । दुवै पदबाट अहिले ह,ट्ने कुरा आउँदैन ।
ओलीको अ,डान सुनेपछि प्रचण्डले स्थायी कमिटी बै,ठक पार्टी एकता ब,चाउनकै लागि रो,किएको स्म,रण गराए । उनले भने, ‘तपाईँले त पार्टी फुटाइसक्नु भएको थियो । मैले क,म्परमाइज गरेर यहाँसम्म आएको हुँ । सुरुवाती सम्झौतादेखि यहाँसम्म आइपुग्दा मेरो ठाउँमा बसेर हेर्नुस् । मेरो ठाउँमा तपाईँ भएको भए के के गर्नुहुन्थ्यो ? तपाईँमा व्यक्तिवादी सोच आयो । विधिमा चल्नुपर्छ । व्यक्तिमा होइन । यो समयमा कसरी महाधिवेशन हुन्छ ?
प्रचण्डले लामो कुरा गरेपछि ओलीले मंसिर ४ लाई नयाँ व्याख्या गरेर जाने कुरा गरेका थिए । उनले भने, ‘अहिलेलाई मंसिर ४ लाई आधार मानेर अगाडि बढौँ । छिट्टै महाधिवेशन गरौँ । त्यसपछि तपाईँ अध्यक्ष हुनुहोला । थप छलफल गरौँ । पौडेल र शर्मालाई देखाउँदै उहाँहरुले पनि थप छलफल गर्नुहुन्छ । होइन भने मेरो बाटो मसँगै छ ।
ओलीको कुरा सुनेपछि प्रचण्डले भने,पार्टी एकतावि,रोधी अभिव्यक्ति दिन छाड्नुस् । मिलेर जानुपर्छ । एक पद जि,म्मेवारी लिँदा राम्रो काम पनि हुन्छ । भोलि मैले माधव क,मरेडलाई पनि लिएर आउँछु । तीनजना बसौँ । छलफल गरौँ । आम जनता र कार्यकर्ताको भावनावि,परित पार्टी एकताबाट भाग्न पाउनु हुन्न ।
Prevओलीलाई रा जीनामा दिन दाहाल-नेपालको आ ग्रह, के ओलिले यसो गर्लान त ?…हेर्नुहोस।
Nextभोलिदेखि साझा यातायात सञ्चालन हुने…हेर्नुहोस् । सेयर गरौ !
हिजो माग्ने अवस्थामा थियौ, आज जनतालाई सहुलियत दिन सक्ने भएका छौ – कुलमान सेयर गरौ !
आमाको स्वास्थ्य सुधार आएपछि हास्पिटल बाट डिस्चार्ज हुँदा कल्पना दाहालले लेखिन यस्तो स्टाटस…हेर्नुहोस् ।